Ny fitiavana sy ny herin'ny fanasitranana avy amin'ny fikasihana - ilay valisoa valisoa
Home News Blog Fitiavana sy hery manasitrana mikasika ny fikasihana
Ny fitiavana sy ny herin'ny fanasitranana avy amin'ny fikasna dia zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika satria mahatonga antsika hahatsapa ho voaro, voakarakara ary tsy dia misy dikany izany nanindry. Oviana ianao no nokasihina farany? Mba hahitana bebe kokoa dia nanao fanadihadiana ny BBC Ny fitsapana mikasika amin'io heviny be fikarohana io. Teo anelanelan'ny volana Janoary sy Martsa tamin'ity taona ity ny fanadihadiana. Saika olona 44,000 no nandray anjara tamin'ny firenena 112 samihafa. Misy andiana programa sy lahatsoratra momba ny valin'ny fanadihadiana. Ireto ny hevi-dehibe ho antsika avy amin'ny zavatra vitsivitsy navoaka:
Ny herin'ny fanasitranana amin'ny fikasihana malefaka
Ao amin'ny tontolo izay mampiroborobo ny fanaovana firaisana ara-nofo haingana sy mampihetsi-po izay matetika tsy maodely amin'ny firaisana mahery setra sy mahery, dia zava-dehibe ny mahatadidy fa mivelona amin'ny fikasihan-tanana feno fitiavana ny olombelona satria mahatonga antsika hahatsapa ho voaro sy tiana, tena ilaina amin'ny fiainantsika ary tafavoaka velona.